Tag: na-eduzi ndu | Martech Zone
Tag: na-edu ndú
Nke a bụ nnukwu infographic site na ndị mgbaghara na otu nzukọ ebe ahịa na ire ahịa na-agbasi ike iji kwado onwe ha. Dịka onye na-azụ ahịa maka ahịa, anyị na ndị otu na-agba ahịa na-agba mgba. Otu isi okwu bụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa na-ere ahịa na-etinyekarị otu atụmanya ha nwere maka ndị ahịa ha na otu ndị ahịa. Anyị na-goro site ahịa-chụpụrụ òtù n'ihi na ha na-aghọta na ha ika emebeghị wulite mmata, ikike na ntụkwasị obi online na na ha ahịa
Anọ m na-enwe mkparịta ụka n'izu a na SaaS CEO bụ onye na-agba mbọ ịgba ụgwọ ọrụ bara uru. Ọ bụ ezie na ha na-akara ma na-ebute ụzọ ha na-ebute ụzọ, ndị otu anaghị adịkarị ịkpọtụrụ ndị na-eduga ha na oku ha na-ebute ya dị egwu. Ọ na-ewe ụdị onye ahịa pụrụ iche iji kpọọ oku 70+ kwa ụbọchị, mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mbido chọrọ ma ọ bụrụ na ọ nwere olile anya ịchụ ahịa zuru ezu iji zụọ ihe ịga nke ọma